လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြင်သစ်နိုင်ငံခရီးစဉ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြင်သစ်နိုင်ငံခရီးစဉ်…
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြင်သစ်နိုင်ငံခရီးစဉ်…
Posted by ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း on Jun 29, 2012 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Photography, Travel |6comments
ပြင်သစ်နိုင်ငံ Gare du Nord ဘူတာရုံသို့ ရောက်ရှိလာစဉ်…
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြင်သစ်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများကဤသို့ ကြိုဆိုကြပါသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီး မှ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား Gare du Nord ဘူတာရုံသို့လာရောက်ကြိုဆို…
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြင်သစ်နိုင်ငံ သမ္မတ Francois Hollande က Elysee နန်းတော်မှ ကြိုဆိုနေစဉ်..
Elysee နန်းတော်တွင်းမှ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ သမ္မတ Francois Hollande..
ပြင်နိုင်ငံ အစိုးရ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ ဇွန်လ(၂၆)မှာ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ အမြန်ရထား Eurostar ဖြင့် ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ရဲ့ Gare du Nord ဘူတာရုံသို့ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီး Mr.Pascal Canfin လာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြီု့မှာရှိတဲ့ Elysee မှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတ Francois Hollande ကကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ (၃)ရက်ကြာနေထိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ဂုဏ်ယူစရာကောင်းသော သမိုင်းဝင် ခြေလှမ်းများဟု ယူဆမိပါတယ်။ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံကြီးများက ဤသို့ အရေးတယူ ဂရုတစိုက် ကြိုဆိုကြဖိတ်ခေါ်ကြတာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အထင်အရှား ကျော်ကြားစေဖို့ ဖန်တီးပေးနေခြင်းလို့ယူဆပါတယ်..။စာအုပ် အနီလေးတွေကိုင်ပြီး ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေ မြန်မာလူမျိုးတွေ ရင်ကော့ ခေါင်းမော့ ပြီးသွားနိုင်လာနိုင်မယ့် ခေတ်ကိုရောက်လာတော့မှာပါ ဟု မျှော်လင့်ရင်း….
ဓါတ်ပုံ…ဒီမိုဝေယံ မှ ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။
ဘယ်လောက်ကြည့်ကြည့် မရိုးနိုင်ဘဲ ကျက်သရေ ရှိလွန်းလှတဲ့ ပုံတွေ ကို စုစည်းပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုသုည ရှင့်။ :-)
(စာအုပ် အနီလေးတွေကိုင်ပြီး ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေ မြန်မာလူမျိုးတွေ ရင်ကော့ ခေါင်းမော့ ပြီးသွားနိုင်လာနိုင်မယ့် ခေတ်ကိုရောက်လာတော့မှာပါ ဟု မျှော်လင့်ရင်း….)
မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ပြည့်ဝလာတော့မယ်လို့ ယုံကြည်မှုရလာပြီ။
ဘန်ကောက်ထရန်စစ်ရောက်တာနဲ့ စာအုပ်အနီဆိုတာနဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့ ထိုင်းတွေရဲ့ မျက်နှာကို သောက်မြင်ကပ်ချက်များ… အခုတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့တွေကို ကျော်လွားနိုင်တော့မှာပါ… ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အနစ်နာခံ ကြိုးစားမှုတွေနဲ့…
တိုင်းပြည်အတွက် ဆက်လှုပ်ရှားဖို. အမေစု ကျန်းမာမှ ဖြစ်မှာ
တခြား ဆိုက်တွေလဲ မသွားဖြစ်တော့
ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ အမေစု သတင်းတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ကို အမြဲအဆက်မပြတ်တင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျား။
အမေစု မရှိတော့ရင် ကျနော်တို့ ဘယ်သူနဲ့ အစားထိုးမလဲဆိုတာ
အတော့်ကို ခက်ခဲစွာ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်။အမေစု တိုင်းပြည်အတွက်